Ho hita eo na tena hisy izany hitoetra maharitra amin’izay eto amin’ity firenena ity na fihatsarambelatsihy tamin’iny vahiny ara-panahy iny ihany no mody namafana ny tokotany. Maro ny hafatra ary efa saika vitan’ireo mpisehatra politika heverina ho goavana avokoa ny namintina azy. Tsy moramora anefa izany hoe tena hiady amin’ny kolikoly na koa tena hiaro ny tontolo iainana sy zo maha olona, indrindra, hamerina amin’ny laoniny ny soatoavina maha izy antsika. Efa naman’ny niteny an-kolaka mihitsy aza ny Papa hoe tsy hisy fampandrosoana ho vanona eto raha tsy tomombana ireo rehetra ireo. Heverina fa voalohany niantefan’ny hafatra rehetra ny filoham-pirenena izay, raha sanatria, mbola diso famindra eo tokoa dia naman’ny namato-tena tamin’ny fianianana naveriny indray nanoloana ity Raiamandrenibe ara-panahy ity. Ho sahin’ny filoham-pirenena ve ny hampiaina seho ivelany fotsiny ny Papa sa tena heveriny ho zava-dehibe iny famerenana velirano imason’olon-dehibe iny ? Ho hita eo tokoa izany tena hoe fitsinjovana ny vahoaka Malagasy sy fanavotana ny firenena hitohy izany. Sa moa vao hiainga mihitsy ?